Lofant Tibetan - imbiza jikelele
Lofant Tibetan kuyinto zisetshenziswa futhi kungokwalabo umndeni ka yasnotkovyh. Zonke izinhlobo lofanta zinhle uju isitshalo, kodwa okungcono kubhekwa anise lofant. Tibetan Lofant has a stem engafinyelela kwengu-1 m futhi amaqabunga ayo abukeka afana amahlamvu sembabazane. Ukutshala lesi sitshalo linesizotha, ngakho-ke ungakwazi ngisho zenziwe ukutshalwa novice wensimu. Uma une inkinga yokushoda umhlaba, lofant Tibetan ke zingatshalwa ngisho izihlahla. Ukuze uthole olunye izitshalo aluhlaza sikhule idinga evundile izindawo okwanele.
Lofant Tibetan - ezikhulayo
Lesi sitshalo has ayelapha, njengoba izidakamizwa ongahluziwe isetshenziswa lonke ingxenye aboveground yalo. Thenga imbewu lofant Tibetan kungaba esitolo futhi ikhule izithombo ngonyaka wokuqala wokuphila, ungenza ahlabayo eyodwa kuphela. Sika phakathi nezitshalo eziqhakazayo ezingaba ngu-15 amasentimitha of emvuthwandaba wako. Lofant Tibetan ngokuvamile ithwala Ubusika zethu, ngisho nalapho engekho kweqhwa. Ukuvikela izitshalo ebusika endaweni lapho likhula, kubalulekile ukuba ufihle amahlamvu noma utshani.
Ngonyaka wokuphila wesibili, lesi sitshalo uqala zikhule ngokushesha futhi singenza izidakamizwa izinto ezinhlelweni zokuthenga amabili izinto zokusetshenziswa. Okokuqala nginqume ingxenye isitshalo ngoJulayi, lapho kungenzeka ukusika kuze kufinyelele 35 amasentimitha zalesi sihlahla. I izihlahla sesibili Kwenziwa ekwindla, kodwa ezingeni ukuphakama mayelana 15 amasentimitha. Dry lofanta eluhlaza ezidingekayo njengoba izinto ezivamile zokwelapha eluhlaza.
Amahlamvu, izimbali kanye neziqu lofanta kukhona ukukhiqizwa eziningi oluyingozi, izinto eziphila abakhuthele futhi amavithamini. Kuyinto kahle kushukumisa umzimba, kuyasiza ukuhlukana emzimbeni ubuthi ahlukahlukene, radionuclides kanye ubuthi. Uma usebenzisa ngaphakathi kuyasiza nge isifo sezinso, umgudu wokuphefumula kanye ipheshana emathunjini. Futhi lesi sitshalo kunomphumela ukuzola ohlelweni womuntu sezinzwa futhi kuyasiza kulesetayelekile blood pressure.
Lapho isicelo ihlelwe ngokulandelana kwezihloko lofant kunomphumela magciwane, ngakho-ke asetshenziselwa ukuphilisa izilonda namanxeba kanye nezinye izifo zesikhumba. Ukusetshenziswa ukumnika lofanta izinwele hashaza kuyasiza futhi siqinise izimpande zawo zabo, futhi kususa imibimbi futhi igcina kuyaqina isikhumba.
Lapho usebenzisa i-lofanta Tibetan kukhona jikelele oluqinisayo kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, ngakho-ke kuba ekwelapheni izifo eziningi. Ngokwesibonelo, amahlamvu fresh zalesi sitshalo kuthiwa iqalele kahle emlonyeni kwandisa potency babantu.
Lungiselela lofanta ukumnika lula, lenzani ukuthatha spoonfuls ezimbili imifino uthele ezimbili izinkomishi zamanzi abilayo futhi qedani amahora amathathu. Lapho langaphakathi reception isiphuzo ½ inkomishi kathathu ngosuku ngaphambi nje ngokudla. Lapho isicelo ihlelwe ngokulandelana kwezihloko ukusula isikhumba kanye ukumnika kungaba ukungezwa lapho eyigeza noma uhlambulule amakhanda.
Ukulungisa tincture zalesi sitshalo udinga mayelana 200 amagremu oluhlaza uthele isigamu ilitha likagologo. Ngemva kwalokho, phakathi nenyanga kufanele bagcizelele endaweni emnyama, kubalulekile ukuba ngezinye izikhathi ikhathaze kwengoma. Ngemva ukumnika usulungile, kufanele kuthathwe kathathu ngosuku imizuzu 20-25 ngaphambi kokudla. Ekuseni nakusihlwa, thatha 10 amathonsi, futhi ntambama 20.
Lesi sitshalo has a nephunga elimnandi futhi ungavele zizungeze bese ezinye bed nezindawo uzothola ophethe vivacity futhi ekuqhumeni amandla. Ungase futhi hang in the efulethini isikhwama lelineni lofant omisiwe. Yibeke kufanele kube eduze ekhanda embhedeni, futhi ukuthuthukisa ukunambitheka ngezikhathi ukukuthinta izandla.
Lofant futhi kungaba ukungezwa amasaladi, ukuze inyama izitsha, itiye, compotes. Wasebenzisa njengoba spice e ukuwafaka utamatisi kanye ukhukhamba ingasetshenziswa wokubhaka.
Ngakho, siyabona ukuthi lofant Tibetan anezakhi eziningi ewusizo nokwelapha ngakhoke ufanelwe ilungelo uthando nokunakwa balimi.
Decembrist - imbali ebusika
Amagilebhisi Tukai: incazelo ezihlukahlukene, ukunakekelwa efanele kanye nokubuyekeza
Indlela ziqhume oats. amathiphu
UTolstyanka: ukunakekelwa ekhaya, ukufakelwa, ukuchelela
Izinkinga uma ukhulelwe: kwesisu nokuguqulwa, izinhlobo kanye izimbangela
Ihhotela "Oktyabrskaya", Krasnoyarsk: ikheli, inombolo yocingo, izibuyekezo, izithombe
Barnevelder, inkukhu zohlobo: incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Ukufunda ukubuyekezwa. "Visan" njengoba iyindlela eyinhloko yokuthutha bashukwa endometriosis
Isilinganiselwa American TV ewuchungechunge ngonyaka 2015-2016